Jijiga oo Gaadiiddleyda Lagu Amray Qaadashada Warqada FidaBixinta – Rasaasa News
May 10, 2014 Amray, FidaBixinta, Gaadiidleyda, Jijga, Lagu, oo, Qaadashada, Warqada
Jijiga, May 10, 2014 – Magaalada Jijiga, ayey masuuliyiinta dawlada degaanku ku amrtay dadka leh gaadiidka in ay qaataan warqada Fidabixinta, oo uu samaynayo garaash dhawaan laga furay magaalada.
Degaanka Somalida, oo kolka si dhab ah loogu dhabogalo aan dhana kaga tirsanayn dalka Atoobiya ayaa wax la wadaaga Somaliya. Gaadiidka leh taarikada Somaliya, waxaad ku dhex wadan kartaa meel kasta oo ka mida degaanka Somalida, marka laga reebo magaalada Jijiga, oo iyadu si buuxda gacanta ugu sii galaysa Atoobiya.
In kasta oo ay magaaladu sii hoos galayso Atoobiya, ayeyna hada ka hor Atoobiya ku khasbi jirin dadka Somalida ah in ay raacaan shuruucada Atoobiya. Iyada oo ka cabsi qabtay in hadii ay samayso khasab, ay dadku ka horyimaadaan, taas oo sii xoojin karta ka sii fogaanshaha Atoobiya.
Hadaba, labadii sano ee ugu dambeeyey waxaa magaalada Jijiga ku soo badanayey dad ka imanaya dibada, kuwaas oo si garasho la,aan ah uga hirgalinaya shuruucda Atoobiya degaanka Somalida.
Waxaa dhawaan magaalada Jijiga laga furtay xarun lagu Fidabixiyo baabuurta, oo uu leeyahay nin ka mid ah Qurbo joogta u dhalatay degaanka, kaas oo hogaaminta maamulka la hoos galay in gaadiidleyda degaanka lagu khasbo qaadashada warqada Fidabixinta baabuurta.
Warqada Fidabixinta oo cimrigeedu yahay hal sano, ayaad ku qaadanaysaa celcelis ahaan lacag dhan saddex kun oo birrta Atoobiya (Birr 3,000), taas oo waajib ku ah gaadiidka Mooto iyo wixii ka wayn.
Warqada Fidabixinta oo Addis Abab iyo magaalooyinka kale ee Atoobiya, laga bixin jiray ayaan khasab ku ahaan jirin degaanka Somalida, hadii uusan gaadiidku u gudbayn xaga Atoobiya.
Waxaa kale oo sanadkii 2012, sidan si la mid ah looga furay Jijiga, dugsiga tababrka baabuurta oo uu samaystay ruux Qurbo joog ah. Dugsigaas qofkii aan warqad ka wadan ma qaadan karo warqada darawalnimada (Driving licene).
Shuruudaha lagu qaatana waxaa ka mid ah, in ruuxu dhamaystay Dugsiga dhexe, qori karo akhrina karo Xabashiga.
Hadaad imtixaan gasho lacagta lagaa qaadi waa 2,000 Birr, haddii aadan imtixaan galina lacagta lagaa qaadi waa 6,000 Birr.
Dadka Qurbo joogta ah, oo badankoodu ah dad garab rarato ah, oo aan wax aqoona lahayn, ayuu hungurigoodu yahay minidi labo afleh dalkana u binaynaya Atoobiya.